IiSaladi zoNyaka omtsha 2018, zokupheka kunye nezithombe ezilula kunye ezihle: Iifalthi-izandi ezintsha zeNtshontsho Zonyaka onokupheka, umfanekiso
Umncedi owaziwayo uyazi ukuba isibambiso seentlobo zeeterefestile, kuquka noMnyaka omtsha, iiladi. Eyona mivuzo elamnandi, ingcono - oku kukuphela kolawulo oluphambili lwabasetyhini bethu ngo-Eva. Akumangalisi kukuba, ngamnye wabo unomdla kakhulu ngalo mbandela kwaye uzama ukupheka izitya ezilula kunye nezithandwa zonke, njengengubo yoboya kunye neolivier. Eyona nto ininzi ithandwa ngabantu abahlukahlukeneyo bezocokorori abangakwazi ukunqoba iintliziyo kunye nesisu seendwendwe ezineenkcukacha zokuqala zentle. Kuye malunga neendlela eziqhelekileyo, ezihlwabusayo nezilula eziza kuxutyushwa kamva. Kwinqaku lethu lanamhlanje awuyi kufumana ii-vinaigrettes zeklasi kunye neembumba, kodwa uya kufunda ukupheka ama-Salads amahle kakhulu eNyaka omtsha 2018 Inja ngokulula kwaye ngokukhawuleza. Ukongezelela, uya kufumana iintlobo zee saladi eziza kubhenela kungekuphela kuphela kwiindwendwe, kodwa ziyakuthi zikhombise uphawu oluphambili lweNjaja ​​ye-2018 -Yellow. Funda kabanzi malunga nokulungiselela kwabo kwiindlela zokupheka ezintsha ngezinyathelo kunye nezithombe kunye namavidiyo.
Iiladi ezilula kunye ezimnandi zoNyaka omtsha 2018 kunye neehofu zokunyathela ngeenyawo kunye neefoto
Ezinye zezinto ezilula, kodwa ezihlwaya kwaye ezinomdla, i-Salads yoNyaka omtsha ingabizwa ngokuba yiintlobo nge ham. Ngokuqhelekileyo, ukuzalisa isaladi yenyama, i-mayonnaise okanye ukhilimu omuncu isetyenziswa. Kakade ke, kule meko, isaladi kunye ne-ham kunye nemifuno phantsi kwe-mayonnaise ayiluncedo kumfanekiso. Kodwa ngokuqinisekileyo unako ukwanelisa ukulamba kwakhe kwaye ukukholisa intsebenziswano yakhe enempumelelo. Emva koko, uya kufumana iresiphi yesaladi esilula kwaye isolisayo yoNyaka omtsha 2018 kunye nomnxeba, ofana nabo bonke abathandi bokupheka inyama.
Izithako eziyimfuneko zesaladi esilula kunye nehleko yoNyaka omtsha nge ham
iinanimpe ezinamathanga -200 gr.
I-lettuce ishiya -1 inqwaba
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo for recipe elula isaladi esimnandi kuMnyaka omtsha 2018 nge ham
Le saladi ilungiselelwe ngokulula, ngoko iyakwazi ukuphathiswa kumyeni. Ngoko, into yokuqala esiyinqumle kwiibhubhu ezincinci yincinci ye-fat fat fat.
Nginaninha enamathinini sidla ijusi. Emva koko sizama ukuwasika ezincinci ezincinci kunye ezintle njengehhafu. Le yimeko ekhethekileyo, ngoko isaladi ayiyi kuluva nje kakuhle, kodwa intle.
Sishintsha i-ham neyinaninjana kwisitya esikhulu. Yongeza kubo isiqingatha se-can of green peas ngaphandle kobisi.
Ngoku vula amaqabunga eelayiki. Kule recipe, zombini i-iceberg ne-roman iza kusebenza kakuhle. Unokuzama ukubuyisela isaladi ngamagqabi esipinashi. Phakamisa kakuhle imifuno kwaye udibanise izandla zakho nge-random order.
Yongeza isaladi kwizinto eziphambili, izityuwa ukunambitha. Emva koko vula i-mayonnaise. Yongeza kwiinambitha uze udibanise kakuhle.
Ngaphambi kokukhonza etafileni, i-lettuce kunye neh ham zigcinwa ihafu yesure kwifriji.
Eyona mivuzo emihle kunye nama-mushroom kwitheyibhi yokugubha kwi-Recipe yonyaka-nyathelo kunye nesithombe
Ezinye zezona zinto zilungele ukulungiswa nokulungelelaniswa kwitheyibhi yokutya yeNyaka omtsha iiladi ngamakhowe. Ngokuqhelekileyo kwi-recipe yabo ungayifumana iifolononi - ezibiweyo okanye zikhethiweyo. I-recipe yethu isebenzisa ukhetho lokugqibela, oluvisisana ngokupheleleyo nenkukhu kunye namakhukhamba ekhoyo kwi-saladi. Iinkcukacha malunga nendlela yokupheka enye yee-salads ezilungileyo kunye nama-mushroom kwitheyibhi yokutya yeNyaka omtsha kwi-recipe ngesinyathelo esezantsi.
Izithako eziyimfuneko yesaladi engcono kunye nama-mushroom kwitheyibhi yokutya yeNyaka omtsha
Inkukhu yenkukhu -1 pc.
amakhowe amancinci -180 gr.
iifatata -2 ii-pcs.
izaqathe -1 pc.
ikhukhamba ekhethiweyo -2 ii-pcs.
ushizi nzima -80 gr.
i-mayonnaise - 100 ml
iqela le parsley
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo ye-recipe engcono ye-saladi ye-mushroom kwitheyibhile yokutya kwiNyaka entsha
Le nguqulo yesaladi ye-mushroom ikhukhumele. Kwaye kufuneka siyiqoke ukusuka phezulu, njengoko siza kuguqula isaladi esilungisiweyo kwaye siyifumene ngaphandle kwesikhunta. Ngako oko, ukulungiselela ukulungele ukuthatha umzobo obunzulu be-silicone, kwaye uluhlu ngalunye lwezithako lusasazeka kakhulu kumida yalo. Uluhlu lokuqala lwesaladi yethu luya kuba ngamakhowe ahlambulukileyo: uwabeke phantsi kwimilo yeefowuni phantsi, ngokuqinileyo komnye nomnye.
Gcoba ama-mushroom phezulu kunye neparsley. Inqanaba elilandelayo le-saladi lenziwa kwiifatata ezibisiweyo. Ukusabalalisa iifatata kwifom, cindezela ubunzima, ukuze ulale ngokugqithiseleyo, kwaye amakhowe afakwe ngokucacileyo kwiifatates. Iifatata ezincinane zetyuwa uze ungeze ukugqoka kwi-cream edibeneyo kunye ne-mayonnaise.
Ngoku ukujika kwenkukhu. I-fry prery fry kwixabiso elincinci leoyile yemifuno uze uphekwe. Emva kokupholisa uze usike inyama ngokufanelekileyo. Sasa inkukhu phezu kweetatate kwaye udlulise ukhilimu omuncu nge-mayonnaise sauce. Ungakulibali ukunyakraza umgca ngamnye ngesipuni, ukuze isaladi ibomelele kwaye ayifuni.
Inqanaba elilandelayo lisetyenziswe kumakhukhamba aqoshiwe, esiwagawulayo kwiisangqa, ukuba imifuno mincinci. Amakhukhamba aphakathi kunye namakhulu kufuneka anqunywe. Yongeza kwinqanaba elincinci lokugqoka.
Oku kulandelayo kukujika kweeqanda ezibiweyo. Kwakhona uluhlu oluncinci lwe-sauce ukusuka kwi-mayonnaise kunye ne-ukhilimu omuncu.
Ingqungquthela yokuloba i-lettuce ivela kwiinqwelo. Iikroti zipheka ngaphambi kokuba zilungele, zihlambuluke kwaye zibe zintathu kwi-grater ephakathi. Emva koko i-spoon isasaza i-carrots esincinci kwaye ichithe i-spoon. Yongeza i-sauce isuka kwi-cream cream kunye ne-mayonnaise.
Ekugqibeleni, ufafaze isaladi ngeeshizi uze ufake isaladi efrijini ngeeyure eziliqela. Ukuze sikhuphe isaladi elungiselelwe, sibeka iplate ephambili kwaye siyiguqule ngobumnene isikhunta se-silicone. Ngoku sinalo isaladi ekhethiweyo, ehlotshiswe ngamakhowe e-pickled kunye nemifino.
Isaladi esheshayo kwaye ilula kakhulu yoNyaka omtsha 2018 - zokupheka kunye neefoto isinyathelo ngesinyathelo
Isaladi esinoMifuno yoNyaka omtsha kwizithako ezitsha zihlala zihoywa. Ngakolunye uhlangothi, kuyaqondakala: ifomati yeeholide idinga inani elikhulu lezonkcenkceshelo kunye nezitya eziphezulu zeekhalori, kunye neengcamango zemifuno ebusika ayikhuthazi. Kodwa ukuba ukhetha iresiphi elungileyo, ke isaladi esheshayo nesilulayo kwiNew New Year iya kuba lula ukunika ingxaki kumnye umntu. Ngokomzekelo, unokwenza isaladi esilula kunye neetamatisi ze-cherry kunye neminquma yemihla, enokutholisa indlala kwaye ngexesha elinye liphazamise ukuphumla okusebenzayo ku-Eva. Indlela yokulungiselela le saladi esheshayo nelula kakhulu imifuno yeNew New Year 2018 efundwayo.
Izithako eziyimfuneko zesaladi esheshayo nesilula ngokuNyaka omtsha 2018
i-cherry tomate -1 ibunch
i-avocado -1 ipcs.
iminqumo ngaphandle kwemigodi - 10-15.
i-lettuce ishiya -1 ibhinqa
ii-mushroom - 100 gr.
ipolisi isiBulgarian -1 ii-pcs.
ikhukhamba -1 iipcs.
ikhonksi yeganga -1 / 2
I-Feta ushizi - 100 gr.
ioli yomnqumo -1 tbsp. l.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo for recipe elula isaladi yemifuno esheshayo yoNyaka omtsha
Siqala ngokuthi isaladi yam, utamatisi, ikhukhamba, i-pepper kunye nama-mushroom alungile. Isici esahlukileyo sale recipe kukuba siza kuhlanganisa amakhowa aluhlaza. Ngoko ke, intle yesitya esilungisiweyo iya kuba yinto engavamile, kodwa iyanelisa. Ukuvuza isaladi ngezandla zakho ngokukhawuleza.
Iitamatisi ze-Cherry zigalelwe kwisiqingatha kwaye zongeza kwi-saladi.
Ikhukhamba kunye nembewu-inqunywe iipilisi ezincinci ngokwaneleyo. Sithumela imifuno eluhlaza kwiimveliso eziphambili.
Amagqabi anqumle abe ngamancinci amancinci. Izikhumba zeethiya azikwazi ukususwa ukuba amakhowe azincinane.
I-avovoc cut cut half and remove the stone. Ngoko ngqo ngqo kwesikhumba, nqunqa inyama ngommese kwiibhubhu ezincinci. Ngesipuniko sihlula i-pulp size siyithumele i-avocado esele yicwecwe kwisitya.
ImiNquma iyanqunyulwa ibe ngamacangci amancinci. Kanye kunye nengqolowa yamanqatha, sithumela imifuno kwisaladi.
Ihlala isele ukunciphisa i-feta cheese kwiikerubhi ezincinci, zongeza ityuwa kunye nexesha kunye neoli yeoli. Sisebenzela esi sidlo sesitshalo emva kokupheka.
Yiyiphi i-saladi kwitheyibhi yokutya engenakulungiswa ngokukhawuleza kunye neentlanzi zaselwandle? I-step-by-step recipe
Phakathi kwee saladi ezinokupheka ngokukhawuleza kwaye zipheka ngokulula kwitafile, kufuneka kuqwalaselwa ngokukhethekileyo kwiindlela zokukhetha ezilwandle. Abaninikazi bezindlu abaninzi bayesaba ukulungiselela i-mussels okanye i-squid ngokwabo, bakhethe ukuthenga ngokukhawuleza i-cocktail yase-sea. Kakade ke, ukuhlukahluka okunjalo kwimixube yokutya ekulungele ukulungiswa kwintlanzi ingasetyenziselwa isaladi. Kodwa kunokuba luncedo ngakumbi ukulungiselela isithako ngasinye ngezandla zakho, ingakumbi ukususela ekubeni inkqubo yokupheka izidlo ezidliwayo zolwandle ayithathi ixesha elide. Funda kabanzi malunga naluphi na isaladi kwitheyibhile yokutya onokulungiswa ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza kwiindawo zokutya zaselwandle.
Izithako eziyimfuneko ezenza kube lula kwaye zikhawuleze ukufumana isaladi kunye neeflanzi zaselwandle kwitheyibhile
squid -1 iipcs.
amancinci amancinci - ama-5-7.
i-anyanisi ebomvu -1 pc.
ijusi ye-lime okanye i-lemon -1/2 indebe
i-soy sauce -2 tbsp. l.
ipropper -1 ipc.
i-coriander -1 encinci
Imiyalelo yesinyathelo ngeyinyathelo malunga nendlela yokulungisa isaladi kwisitya sezonka sezilwanyana ngokulula kwaye ngokukhawuleza
Iibhuthi zamanzi zixutywe kunye nesiqingatha sejisi lemon bese zifaka umlilo. Siletha i-liquid kwi-abiil. Yongeza i-mussels (ihlambuluke kakuhle) kwaye igubungele ngesiqhekeza, pheka imizuzu emi-5-6. Ukusebenzisa i-spoon, sithatha i-mussels. Lezo ikopi ezingavulwa ngokukhawuleza zilahlwe, ezinye zifakwa kwi-colander.
Yongeza amancinci amanzi kwaye uthumele i prawns ukuba ubilise imizuzu embalwa. Ngokukhawuleza xa batshintsha umbala kwaye baqondisa, siphumela siphinde siphonse e-colander.
Ama-Squids anqunyulwa ngamacangci amancinci kwaye atyiweyo ngamanzi abilayo ngokubhekiselele kumasekhondi angama-30-40. Kodwa siza kupheka ama-octopus amancinane - malunga nemizuzu eyi-3-4. Ezi ntlanzi zasemanzini ziphinda ziphonswe kwi-colander ide zicolile ngokupheleleyo.
Okwangoku, i-cherry tomate iyanqunyulwa ngesiqingatha. I-bulb igaya kakhulu. UCilantro unqunywe ngommese obukhali. Sisusa i-pepper ebukhali kwiimbewu kwaye siyinqumle kwaye sinqabile.
Sibeka zonke iifama zaselwandle kwisitya esikhulu. Yongeza i-cherry, pepper kunye ne-coriander.
Iityuwa ukunambitha nokugcwalisa isaladi ngomxube we-soy sauce kunye nesiqingatha sejisi lemon. Wasebenza ngokukhawuleza etafileni.
Iimali eziqhelekileyo nezolungileyo kunye nee-shrimps zeNew Year-recipe kunye nesiteyathelo inyathelo ngesinyathelo
I-Salads kunye ne-shrimps kwitheyibhi yokutya kwiNtshonalanga Yonyaka isoloko isitya esingaqhelekanga nesidliwayo. Uhlobo oluthile lwesaladi ye-shrimp, esiyiphakamisayo ngokuzayo, lulungiswe ngamacwecwe kwaye oku kukhangeleka ngakumbi. Indlela yokwenza isaladi engavumelekanga kunye ne-shrimps yoNyaka omtsha efundwa kwiresi engezantsi.
Izithako eziyimfuneko zesaladi ezingavamile kwaye ezihleko kunye ne-shrimps yoNyaka omtsha
i-shrimps enkulu ehlanjwe -300 gr.
iifatata - 2-3 ii-pcs.
amaqanda - ama-4.
iqabunga le-bay -3 iipcs.
ii-peppercorns ezimnyama -5.
i-mayonnaise - 80 gr.
caviar ebomvu yokuhlobisa
Umyalelo wesinyathelo ngeyinyathelo somvuzo ongeqhelekanga kunye nesonka esimnandi kwiNyaka omtsha
Ukupheka kude kube namazambane ezilungeleyo kunye namaqanda. Qinisekisa ukuyipholisa uze uyihlambulule.
Ngoku siya kulungiswa kweemfene. Ukwenza oku, yizisa amanzi ekubiliseni, yongeza iqabunga laso, ityuwa kunye neepasta zepilisi. Siphonsa i prawns emanzini abilayo kwaye sipheke size silungele. Emva koko sipholile kwaye sihlambulukile.
Ngoku ukuba zonke izithako zilungiselelwe, unokuqhubeka ukuhlanganisa isaladi. Uluhlu lokuqala lwesitya luya kuba i-mayonnaise.
Ukusabalalisa isiqingatha sempempi kwinqanaba le-mayonnaise. Kwakhona, gubungela iifama zaselwandle kunye noqweqwe oluncinci lwe-mayonnaise.
Uluhlu olulandelayo uluhlaza. Ukwenza oku, iifatata ezintathu ezibilisiwe kwi-grater. Ukusabalalisa ukusabalalisa kulo lonke isidlo kwaye udibanise i-mayonnaise.
Emva kokuba amazambane senze uhlaka lweeqanda. Amaqanda abilisiwe ngamatya enkukhu emithathu kwi-grater engasondelanga kwaye ehambisa ngokufanayo. Ngaphezulu kwe-mayonnaise encinane.
Sifaka i-shrimp eseleyo kwaye siwagubungela nge-mayonnaise encane.
Ukusuka phezulu kubeka ubude be-caviar. Sithumela isaladi esilungileyo ubuncinane kwiiyure ezingama-6 kwifriji.
Iigadi ezihlwaya kakhulu zonyaka oNtsha 2018 Izinja ezinokukhupha - ezilula zokunyathela ngeendlela
Ekubeni isimboli seNtsha entsha yoNyaka i-2018 yintja-yezilwanyana, izilwanyana zincoma ukuba zixube kunye nezitya ezahlukeneyo zenyama. Yaye i-salads kulo mgaqo akufanele ibe yinto ehlukile. Ngokomzekelo, enye yeyona mpu melelo kakhulu kule ndawo kunye nee saladi ezihlwaya kakhulu zonyaka oNyaka we-2018 Inja zingabizwa ngokuthi zikhethwa ngenkukhu. Iresiphi elandelayo kunye nenkukhu, i-walnuts kunye nama-crranberries omisiwe ayinakubizwa ngokuba yi-prosaic, kwaye nguyena umgangatho inja inokuyithandayo izitya zonyaka omtsha. Funda ngokubanzi malunga nendlela yokwenza isaladi esimnandi kunye nenkukhu yoNyaka omtsha we-2018 Inja kwi-step-by-step-step step below.
Izithako eziyimfuneko yesaladi ehlwabisayo kakhulu kuMnyaka omtsha 2018 Inja ezivela kwinkukhu
Ifayile yenkukhu -3.
i-walnuts ehluthwe - indebe ye-3/4
ama-crranberries omisiwe - 150 gr.
iziqu ze-celery - iipcs 6.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo for recipe elula isaladi esimnandi kunye nenkukhu yoNyaka omtsha 2018 Inja
Okokuqala kufuneka ubilise inyama yenkukhu. Ngenxa yoko, ifayile yam, sisusa imivuno kunye nefilimu. Emva koko usike inyama ibe ngamanzi amakhulu kwaye uphonsa ngamanzi abilayo. Pheka imizuzu engama-15-20 de ukupheka. Emva koko, inyama ipholile phantsi emanzini ukuya kwiqondo lokushisa. Yinqumle iifomthi kwiibhubhu ezincinci.
Iicranberries ezomileyo zizele ngamanzi abilayo kwaye ziyeke imizuzu 2-3. Emva koko amanzi agxothwa kwaye avumele ukugqithisa okugqithiseleyo, ukuphosa amajikijolo kwi-colander. Yongeza i-cranberries kwenyama.
Izitampu zesitroliyeri kunye noomatshini obancinci kwiphilisi yephepha. Sika isilimo esidliwayo esinamafutha esinyan
Ngoku ukujika kwama-walnuts. Ama-kernels kufuneka aomiswe kwipeni elomileyo elomileyo, kodwa musa ukukhawuleza. Emva koko ulinde de i-walnuts ipholile kwaye isebenzise ipini yokuqhafaza ukuze ugaye okwaneleyo.
I-Solim kunye nepelepele (ngokuzikhethela). Hlanganisa kakuhle kwaye wongeze i-mayonnaise.
Siphakamisa isaladi kwi-homogeneity kwaye siyishiye kwindawo yokushisa yecala ihafu yesure. Emva koko, isaladi ikulungele.
I-Salads yonyaka omtsha-izandi ezintsha zonyaka we-2018 kunye neetayibhondi zinyathelo-nge-nyathelo kunye nesithombe
Ngamanye amaxesha ukulungiselela isaladi entsha yoMnyaka omtsha kunele ukutshintsha nje izithako ezimbalwa kwidiskhi ethile yeklasi. Ngokomzekelo, isaladi esitsha esilandelayo yonyaka omtsha ka-2018 kunye neTyhuna yinguqulo ehlaziywayo yazo zonke iimimosa zakho ozithandayo. Njengo-Olivier, le saladi ithandwa kakhulu ngo-Eva. Yaye inguqulelo yakhe ehlaziyiweyo yongxowa enqiniweyo enamathanga eninzi njengamanye, njengoko inqabileyo yesaladi kule ntsebenzo iyona yintsusa kwaye iyabonakala. Zonke iinkcukacha zokulungiswa kwe-salad-entsha-2018 kunye ne-thinethi kwi-step-by-step recipe.
Izithako ezibalulekileyo zeSaladi yeNtsha-iNewvelties 2018 kunye neTinned Tuna
ibhanki ye-tank -1 ibhanki
amaqanda - ama-5.
izaqathe - ii-3 iimpumelelo.
irayisi ephekiweyo - 150 gr.
i-mayonnaise - 60 gr.
ityuwa kunye nepelepele ukula
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo iresiphi yesalathisi-esinoveli ngo-2018 kunye neTyhuna kwiThebula leNtsha
Isaladi edibeneyo, efuna ukulungiselela kwangaphambili ezinye izithako. Ngoko ke, okokuqala, ubilise ilayisi elide emanzini amanzi uze upheke. Emva koko vumela irayisi ipholile ngokupheleleyo kwaye uyibeke kwindawo engqongqo. I-Solim kunye nepepper ukula. Ngaphezulu, faka i-mayonnaise uze usasaze kwindawo engqinileyo yerayisi.
Yifaka imfoloko kunye nebhotela. Ubunzima bufanele bube bufanane kunye bunzima. Yandisa intlanzi phezu kwerayisi uze ungeze i-mayonnaise kwakhona.
Ngoku ufanele ubeke uluhlu lwendalo. Ngako oko, iintsiba eziluhlaza ze-anyanisi zilungele umgodi kwaye zihlanjwe ngokukhawulezileyo ngommese obukhali. Hlanganisa i-mayonnaise kunye no-anyanisi kwaye usasaze ungqimba olandelayo.
Ukupheka amaqanda aqiniweyo abilisiwe. Kopa kwaye uhlambulule igobolondo. Emva koko wenze ucoce oluhle kwaye uhlukanise iiprotheni ezikhupha. Kuloluhlu olulandelayo, sidinga kuphela amaprotheni, esiya kusebenzisa ukutshiza umzukulu kwaye uwabeke phezu kwe-anyanisi. Kwaye, kongeza umgca obuncinci beayonnaise.
Iinqwelo eziphekwe ngaphambili, zihlanjululwe. Emva koko izahlulo ezintathu kwaye ubeke uhla olutsha olwaneleyo. Yongeza ezininzi zeayonnaise.
Isitya sokugqibela se-lettuce senziwa kwi-yolk, ehlanjwe ngokukhawuleza. Gubungela isidlo kunye nefilimu yokutya uze uthumele isaladi kwisiqriqho ngeeyure eziliqela, ukuze zonke iziqendu zihlanjwe nge-mayonnaise.
Iimali zokuqala zonyaka omtsha we-2018 kunye neentonga ze-crab - iindlela zokupheka ezintsha ngeyinyathelo
Sonke sisetyenziselwa isaladi esele i-classic yetafile yonyaka omtsha kunye neentambo zesikhuni kunye nengqolowa. Kodwa ukuba ufuna ukwenza uhlobo olusenyakaleni lwe-crab stick stick yonyaka omtsha we-2018, ke ubeke ingqalelo kule recipe elandelayo. Ukuhlanganiswa okungaqhelekanga kwimixobo yeenkuni kunye nobhontshisi obomvu nemifuno, apho bonke abathandi bezinto ezinqwenelekayo baya kuthanda. Funda ngokubanzi malunga nendlela yokwenza isaladi yangasese kunye neenkuni ze-crab zoNyaka omtsha 2018 kwiresi entsha ngaphantsi.
Izithako eziyimfuneko zesaladi esitsha esasisiseko sokuNyaka omtsha kunye neentonga zesikhumba
i-crab stick - 300 gr.
Ubhontshisi obomvu obunobumba - 200 gr.
I-cheated Grated - 150 gr.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo seresiphi entsha ye-crab yasekuqaleni ifake isaladi ngoNyaka omtsha 2018
Okokuqala, nqunqa iinqaba. Okokuqala uwanqande kwisiqingatha ubude, uze uwaqheke kwii cubes.
Iipilisi zeBulgaria zihlambulukile kwii-septum kunye nembewu. Siyinqumle ipepper ibe yimichilo emfutshane emfutshane kwaye idibanise kwiintonga ze-crab.
Ubhontshisi obunqiniweyo lulahla kwi-colander kwaye ulinde de kubekho umbane ogqithiseleyo. Yongeza iiembotyi kwiimbombo eziphambili.
I-Pomidchiki inqunyulwe kwiibhubhu ezincinane kwaye ithumela emva kweembotyi. Kukhona kwakhona ukufaka i-clove yomhlaba efanelekileyo.
Siyibhinqa i-cheese elukhuni ngaphakathi kwinqanaba eliphakathi kwaye uyongeze kwi-mass mass.
Ihlala kwityuwa isaladi ukunambitha, uyizalise nge-mayonnaise kwaye uyixube kakuhle. Ngaphambi kokuba usebenze kwitheyibhi yokuzonwabisa, kucetyiswa ukuba uthathe esi sidlo isigqithi seyure efrijini.
Unjani uhlobo lwee saladi eziphekayo zokupheka uNyaka omtsha? Inja kunye ne-rusks, iresiphi
I-original original kwaye ngexesha elifanayo i-salads elula yoNyaka omtsha we-2018 Inja ziyakucelwa nge-breadcrumbs. Ngokomzekelo, entliziyweni yenguqu yethu ye-inkukhu engavumelekanga kunye neklabishi. Kwaye kudibanisa abaxhamli kule mxube enika isidlo isandi esitsha esithakazelisayo. Ngaluhlobo luni lwee-salads zasekuqaleni kunye ne-rusks ezinokuzilungiselela ukuNyaka omtsha.
Izithako eziyimfuneko yesaladi yasekuqaleni kunye nabaqhiki, abangayilungiselela uNyaka omtsha 2018 Inja
Inyosi yenkukhu - 1 pc.
I-Mozzarella ushizi - 150 gr.
abachweli - 100 gr.
i-mayonnaise - 4 tbsp. l.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo malunga nendlela yokwenza isaladi yangasese yeNja entsha yeNyaka kunye ne-rusks
Amabele amabisi ngaphandle kwemithi kunye nemithanjeni ithunyelwa emanzini abilayo anetyu kwaye upheke malunga nemizuzu engama-20 uze uphekwe. Emva koko vumela amanzi aphephe aze atholise inyama. Sika i-fillet kwiikhabhi ezincinci.
Iklabishi inqabileyo kakhulu, ngokukhethekileyo kwi-grater ekhethekileyo. Emva koko faka ityuwa encinci kwaye udibanise kakuhle ukuze wenze iklabishi ithambile kwaye uvumele ijusi ihambe.
Siyabukela iMozzarella kwi-grater ephakathi.
Kwisitya esikhulu, hlanganisa inyama, ushizi kunye neklabishi. Hlanganisa kakuhle.
Zama ingcamango kwaye ukuba ufuna enye isaladi yesalayi. Emva kokungeza i-mayonnaise kwaye uphinde udibanise ngokupheleleyo zonke izithako.
Ngaphambi kokuba usebenze, faka amaqabunga ama-crispy kwisaladi.
Umvuzo wonyaka omtsha we-2018 ulula kwaye unoncoko - iipreyile zokuqala eziyi-3 ngaphandle kwe-mayonnaise, ividiyo
Ngoku ukuba uyazi ukwenza i-saladi yoNyaka omtsha 2018 ngokulula kwaye enonkqisayo, sikubonelela ezinye zokupheka ezingavamile kunye nezangaphambili ngaphandle kwemayonnaise kunye nemiyalelo yevidiyo. Mhlawumbi ezinye zazo i-salads zibonakala zingekho ezintsha kwaye zikude kunye neengcamango zokupheka. Kodwa inokuthi ichazwe ngokuqiniseka ukuba ngalinye lala ma saladi alincoko kwaye kulula ukuyilungisa. Kwaye esinye isizathu sokuba kutheni kuphekwe uNyaka omtsha. Ngokukodwa ukususela ekubeni isimboli senja ezayo ye-2018 ikhetha izitya ezilula kunye ezintle. Iindlela zokupheka zinyathelo ezithatha i-Step-by-Step 3, i-salad yonyaka omtsha kunye noNyaka oMnandi we-New Year 2018 ngaphandle kwe-mayonnaise iya kufumaneka kwividiyo elandelayo.
Indlela yokupheka i-pasta bolognese: iresiphi yesinyathelo-nge-nyathelo ngesithombe
Isaladi evela kwi-sorrel
Iibhonsi "Isihlamba se-Swallow"
Isidlo, iresiphi elula kakhulu
Ukuhlaselwa phantsi njengendlela entsha yokuzimelela kwabaphathi
Guillaume Depardieu, umlingisi, i-biography
I-brronchitis: iimpawu, unyango lweintsana
Izifo zezandla ezingcolileyo
Yintoni, kwaye ebaluleke kakhulu, indlela yokutya umyeni wakhe
Ukuqhekeza kubantwana: kubangele, iindlela zokuthintela nokukhusela
Ukuhambelana komculo weentlobano zesini
NgoFebruwari 23 emsebenzini: iskripthi, zokupheka ngokukhawuleza
Iholide epheleleyo kunye kunye